काठमाडौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइनबाट नै परीक्षा आवेदन, त्रि.वि. नाम दर्ता र कोर्ष रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने व्यबस्था मिलाएको छ । त्रिविको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानले यस्तो व्यवस्था मिलाएको हो । आज एक सूचना जारी गर्दै सूचनामा भनिएको छ ।
उपर्युक्त सम्बन्धमा विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण उत्पन्न भएको प्रतिकुल अवस्थामा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिम तथा विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने विद्यार्थीहरुले परीक्षा आवेदन, त्रि.वि. नाम दर्ता र कोर्ष रजिष्ट्रेशन फारमहरु रितपूर्वक भरी स्क्यान कपी तल उल्लेखित इमेल ठेगानामा पठाउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
उक्त फारमहरुको सक्कल कपी क्याम्पस खुलेपछि परीक्षा शाखामा बुझाउनुहुन र भौतिक रुपमा उपस्थित हुन सक्ने विद्यार्थीले सक्कल प्रति नै कृ.प.वि.अ.सं. परीक्षा शाखाले तोकेको मिति भित्र पक्लिहवा क्याम्पसको परीक्षा शाखामा बुझाउनुहुन समेत यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराइन्छ ।
थप जानकारी सूचनाको सक्कल प्रतिबाट लिनुहोला । सूचना आफुले हेरिसकेपछि सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सेयर गरिदिनुहोला ।